ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: August 2012
မမြစမ်းအေး ရဲ့ မွေးနေ့ ဆွမ်းအလှူ
ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်း ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ဝင်း + ဒေါ်မြစမ်းအေး (သား) မောင်သူရအောင် မိသားစုမှ မမြစမ်းအေး ရဲ့ ၀ိဇာတ မွေးနေ့ကုသိုလ် မင်္ဂလာအဖြစ် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတိုက်မှာ (အုန်းထမင်း) ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် သီလဆောက်တည်ကြကာ ပရိတ်တရားတော်များနာယူကြပြီး လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်းများ ပေးဝေ ခဲ့ကြပါတယ်။ မွေးရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း မှာ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၀၂. ၀၉. ၂၀၁၂ ရက်၊ တနင်္ဂနွေမှာတော့ ဧည့်ပရိသတ်များအား Eissporthalle မှာ တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ဒီနေ့ဟာ လစဉ် (၃၁) ရက်နေ့တိုင်း နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်နေကျ ဖြစ်တဲ့ ဦးကြည်ဝင်း + ဒေါ်လင်းလင်းလက် (မငယ်) တို့ရဲ့ (သား) မောင်ဝေယံ ရဲ့ နေ့ဆွမ်းအလှူနေ့နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်တဲ့ ၀ိဇာတအလှူနေ့ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မွေးနေ့ရှင် မိသားစုများနဲ့ တကွ ဧည့်ပရိသတ်များ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
မခင်ပန်းခိုင် ရဲ့ မွေးနေ့ အလှူ
ကိုဝင်းထွဋ် + မခင်ညိုလွင် (သား) မောင်လီယိုခိုင် တို့မှ (သမီး) မခင်ပန်းခိုင် အတွက် မွေးနေ့အလှူ ကို နေအိမ်မှာပဲ ကျင်းပဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မွေးနေ့နဲ့ မွေးရက်ပါ တိုက်ဆိုင်တဲ့ မွေးနေ့အလှူပွဲလည်းဖြစ် ပါတယ်။ နံနက် ၁၁း ၁၅ နာရီတွင် ဘုရားအမှူးထား၍ သံဃာတော်များအား ဆွမ်းခဲဖွယ် ဘောဇဉ်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ မွေးနေ့ကိတ်နဲ့အတူ အချိုပွဲများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်းတို့ ကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနောက် သီလဆောက်တည်၍ ပရိတ်တရားတော်များကို နာယူကြကာ လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့ အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်းများ ပေးဝေခဲ့ကြပြီး ဧည့်ပရိသတ်များကိုလည်း ဧည့်ခံ ကျွေးမွေးလှူဒါန်း ခဲ့ကြပါတယ်။
မွေးနေ့ရှင် မိသားစုနဲ့တကွ ဧည့်ပရိသတ်များအားလုံး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေ။
ညီညွတ်ခြင်းနှင်းဆီ အငြိမ့် DVD ခွေများအတွက် သတင်းကောင်း
ညီညွတ်ခြင်းနှင်းဆီ အငြိမ့် DVD ခွေများ ရောက်ရှိနေပါပြီ၊ DVD ခွေများ အလိုရှိပါက ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းတွင်လည်းကောင်း၊ ဦးသိန်းယု ထံတွင်လည်းကောင်း၊ ကိုဦး ထံတွင်လည်းကောင်း တစ်ခွေလျှင် ၁၅ ယူရို နှုန်းဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ကြပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
မောင်ဇော်ညွန့်လှိုင် (ခေတ္တ U.SA) ရဲ့ (၃၇) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူ
မိဘနှစ်ပါးအတွက်လည်းကောင်း၊ သားဖြစ်သူ မောင်ဇော်ညွန့်လှိုင် (ခေတ္တ U.SA) ရဲ့ (၃၇) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အလှူအတွက်လည်းကောင်း ရည်ရွယ်၍ ဒန်ပေါက်ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ သီလဆောက်တည်၍ ပရိတ် တရားတော်များ နာယူခြင်းနဲ့ ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်းများ ပေးဝေခြင်းတို့ကို ဦးလှစု + ဒေါ်စိုးစိုးသိန်း မိသားစုတို့ရဲ့ နေအိမ်မှာပဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီနော်က ဖိတ်မန္တက ပြုထားကြတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်များအားလည်း ဒန်ပေါက် ထမင်းတို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ လှူဒါန်း ကျွေးမွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အလှူရှင် မိသားစုနဲ့ တကွ ပရိသတ်များအားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာစွာဖြင့် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။
ညီညွတ်ခြင်း နှင်းဆီအငြိမ့် ဖျော်ဖြေပွဲ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း
၁၄. ၀၇. ၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ဗုဒ္ဓသာသနရံသီအသင်း (၆) နှစ်ပြည့်မြောက် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တင်ဆက် ဖျော်ဖြေပေးသွားသော ညီညွတ်ခြင်း နှင်းဆီအငြိမ့်အဖွဲ့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်း ကို အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းတင်ပြ လိုက်ပါသည်။
မိသားစု လက်မှတ်ရောင်းရငွေ ၃၀၀၀ ယူရို
တစ်ဦးချင်း လက်မှတ်ရောင်းရငွေ ၁၇၇၅ ယူရို
ခန်းမတွင်ရောင်းရသောငွေ ၆၂၅ ယူရို
စုစုပေါင်းရောင်းရငွေ ၅၄၀၀ ယူရို
အအေးရောင်းရငွေ ၈၂၇ ယူရို
ပန်းကုံးရောင်းရငွေ ၉၃၀ ယူရို
အစားအသောက်ရောင်းရငွေ ၁၂၁၈ ယူရို
စုစုပေါင်းရောင်းရငွေ ၂၉၇၅ ယူရို
လက်မှတ်ရောင်းရငွေပေါင်း ၅၄၀၀ ယူရို
အအေး၊ ပန်းကုံး၊ အစားအသောက် မှရငွေ ၂၉၇၅ ယူရို
စုစုပေါင်းရရှိငွေ ၈၃၇၅ ယူရို
လန်ဒန်မှဟန်းလေဆိပ် လေယာဉ်ခ ၂၀၀၀ ယူရို
ဟန်းလေဆိပ်မှ ကားနဲ့ကြို ၃၈၀ ယူရို
၉ ယောက်စီးကားငှားခနှင့်ဆီဖိုး ၃၀၉ ယူရို
ကိုစိုးနှင့် ကိုဖရန်ကီ ကားဆီဖိုး ၂၅၀ ယူရို
ဆိုင်းဝိုင်းတင်ကားခ ၅၅၀ ယူရို
ဟိုတယ်ငှားရမ်းခ ၆၅၈ ယူရို ၁၆
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် ၄၁၄၇ ယူရို ၁၆
အထွေထွေကုန်ကျစရိတ် ၃၂၃၃ ယူရို ၃၉
စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် ၇၃၈၀ ယူရို ၅၅
စုစုပေါင်းရရှိငွေပေါင်း ၈၃၇၅ ယူရို
ကုန်ကျငွေပေါင်း ၇၃၈၀ ယူရို ၅၅
ကျန်ရှိငွေပေါင်း ၉၉၄ ယူရို ၄၅
Daniel + Nay Chi Oo တို့ရဲ့ နေ့ဆွမ်းအလှူ
Daniel + Nay Chi Oo တို့ရဲ့ နေ့ဆွမ်းအလှူကို ၁၈. ၀၈. ၂၀၁၂ ရက်၊ စနေနေ့က Nay Chi Oo တုိ့ရဲ့ နေအိမ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နံနက် ၁၁း၂၅ နာရီတွင် ဆွမ်းခဲဖွယ်ဘောဇဉ်များကို ဘုရားအမှူး ထား၍ သံဃာ့ ဂုဏ်ကို အာရုံပြုကာ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ခဲ့ကြပါတယ်၊ အဲဒီနောက် လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် သီလဆောက် ၍ ပရိတ်တရားတော်များကို နာယူကြကာ ရေစက်သွန်းချ အမျှအတန်းများ ပေးဝေခဲ့ကြပါတယ်။
အလှူရှင် မိသားစုနဲ့တကွ ဧည့်ပရိသတ်များအားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကြပါစေ။
၂၀၁၂ - ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းများကြောင့် အိုးမဲ့အိမ့်မဲ့ ဖြစ်ရရှာသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက် ဂျာမဏီနိုင်ငံမှ ရခိုင်လူမှုရေးအသင်း၊ ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ အသင်းနှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အလှူရှင်စာရင်း
ဦးလှမောင်သန်း + ဒေါ်စောစန္ဒာလင်း
ဦးစိုးဦးထွန်း + ဒေါ်တင်အေးခိုင်
ဦးကိုဦး + ဒေါ်သန္တာ မိသားစု
ဦးသန်းထွန်းအောင် + ဒေါ်လွင်လွင်စိုး
ဦးကျော်ဇော်ဟိန်း + ဒေါ်စုလှိုင်ထက်
ဦးစိန်ဝင်း + ဒေါ်မြသီတာအေး
ဦးမောင်မောင်ဝင်း + ဒေါ်မြစမ်းအေး
ဦးကြည်ဝင်း + ဒေါ်လင်းလင်းလက်
ဗိုလ်မှူးတင်ဖေ + ဒေါ်အုံးမမ
ဦးအောင်ကျော်စိုး + ဒေါ်စုစု
ဦးသိန်းယု + ဒေါ်ချစ်ချစ် မိသားစု
ဦးထွန်းထွန်း + ဒေါ်ချယ်ရီ
ဦးကျော်ခိုင် + ဒေါ်မြ၀တ်ရည်
ဦးလင်းအောင်သိုက် + ဒေါ်ချိုချို
ဦးမျိုးမြင့် + ဒေါ်ငြိမ်ငြိမ်းမြင့်
ဦးနေ၀င်းလှိုင် + ဒေါ်မိစံ
ဦးညီ + ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း မိသားစု
Dr မြတ်ခိုင် + ဒေါ်နွယ်ဦး မိသားစု
ဦးသိန်းဇော် + ဒေါ်စန်းစန်းမြိုင်
ဦးလှ + ဒေါ်ခင်ထွေး မိသားစု
ဦးကိုလတ် + ဒေါ်စင်ဒီ မိသားစု
ဦး Van Biuk မိသားစု